Budata IObit Unlocker V1.2.0 maka Windows
Ikpo okwu: Windows |dị: V1.2.0 Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Windows (2.38 MB)
Budata IObit Unlocker,
IObit Unlocker bụ obere ihe bara uru nke na-enye gị ohere ihichapụ faịlụ na folda gị nke ị gbalịrị ihichapụ mana na-ekwusi ike na agaghị ehichapụ ya. Ihe omume nke na-ewepu njehie ozi Enweghi ike ihichapụ faịlụ, Ajụjụ Nweta, A na-eji faịlụ a eme ihe faịlụ a ọzọ bụ nụzọ ọ na - arụ ọrụ - ọ dị ka Unlocker.
Mgbe obere nwụnye, usoro ihe omume na-akpaghị aka na-etinye onwe ya na menu aka nri. Yabụ, ịnwere ike ịhọrọ ihe a ga - eme site na ịpị aka nri na faịlụ na folda ị nwere nhichapụ. Site na mmemme ahụ, ịnwere ike imeghe ma hichapụ, kpọghee ma nyegharịa aha, kpọghee, megharia ma ọ bụ detuo faịlụ nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịmeghe ma hichapụ faịlụ ndị ahọpụtara site na imeghe mmemme ahụ na ịpị bọtịnụ Tinye. You nwere ike ịnweta nkọwa nke usoro ihe omume ahụ, lelee maka mmelite, ma nweta nkwado ntanetị site na menu Ntọala nke usoro ihe omume ahụ, nke na-enye nkwado asụsụ English.
Mara: Mgbe ị na etinye usoro ihe omume, a na-enye nhọrọ ntinye Ogwe ngwaọrụ, anyị na-akwado ka ị tinyeghị ogwe ngwaọrụ dị mkpa na sistemụ gị site na ịpị Ikwu.
IObit Unlocker Ụdịdị
Nha faịlụ: 2.38 MB